August 2021 – sudursanchar2
August 15, 2021 AdminLeaveaComment on फेरि देशभरि पहिलेकै जस्तो कडा निषेधाज्ञा गरिदै
काठमान्डौ– काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा अघिल्लो साता (साउन २१–२७) मा भेला प्रशिक्षण तथा गोष्ठी अनिवार्य भर्चुअलको माध्यमबाट मात्रै आयोजना गर्ने गरी आदेश जारी भयो । यसको अघिको आदेश हेर्ने हो भने २५ जनाभन्दा बढी सहभागी नहुने गरी कार्यक्रम गर्न सकिन्थ्यो । यही साउन २८ देखि अगामी भदौ ८ गतेसम्मका लागि जारी आदशेमा यसका अतिरिक्त […]
2 दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, ॐ लेखि सेयर गरौं News
August 15, 2021 August 15, 2021 AdminLeaveaComment on2दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, ॐ लेखि सेयर गरौं News
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस ।७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!! अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐ […]
सपूर्ण नेपालीको लागि दुखत खबर:- काठमाडौ रेड जोनमा ? विज्ञहरु चिन्तित
August 14, 2021 AdminLeaveaComment on सपूर्ण नेपालीको लागि दुखत खबर:- काठमाडौ रेड जोनमा ? विज्ञहरु चिन्तित
काठमाडौं । उपत्यकाका तीन जिल्ला महामारीको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । तीन उपत्यका रेड जोनमा रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताइएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले भदौ ८ गतेसम्मका लागि उपत्यकाको निषेधाज्ञा बढाए पछि उपत्यकामा अर्को लहर आएको हो की भन्ने आम समुदायमा पनि आशंका […]
अब ६५ वर्षबाट बृद्धभत्ता : सहि कि गलत?
August 14, 2021 AdminLeaveaComment on अब ६५ वर्षबाट बृद्धभत्ता : सहि कि गलत?
साउन , काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जीपछिरिङ लामाले ६५ वर्षबाट बृद्धभत्ता दिने व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको सून्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । ‘ जेष्ठ नागरिकले भत्ता पाउने । उमेर ६५ वर्ष कायम गर्नुपर्यो । हामीहरु यहाँ ( शहर ) बसेको […]